OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1966, bande 044, face A
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1966, bande 044, face A
Abstract: U E Maung announces several listening tasks designed for Third year learners of Burmese language. They consist of four conversations between Burmese speakers about various topics. They discuss aboutaboat delayed at Marseille port (France), about how to sendaletter at the post-office, about family and friends, etc. Each conversation is then played again, but speakers makeashort after each sentence to give time to the students to repeat them. Lesson 15 to 22: pronunciation of syllables and sentences in Burmese. Finally, U Chit Pe tells what apparently is the end of the tale of the queen who is mentally disturbed (the beginning of the tale can be found in recording BER-1964-BUR-027-B_SOUND).
U E Maung annonce plusieurs exercices destinés aux étudiants de troisième année de birman. Ils consistent en quatre conversations entre des locuteurs birmans sur des sujets divers. Ils discutent du retard pris par un bateau dans le port de Marseille, puis de la façon d’envoyer une lettre à la poste, puis de la famille et des amis, etc… Chaque conversation est ensuite répétée très lentement, avec des pauses après chaque phrase afin de laisser le temps aux étudiants de répéter chaque phrase. Leçons 15 à 22 : prononciation de syllabes et de phrases en birman. Enfin, U Chit Pe raconte ce qui est en apparence la fin du conte de la reine folle (dont le début se trouve dans l'enregistrement BER-1964-BUR-027-B_SOUND).
ဦးအေးမောင်သည် မြန်မာဘာသာစကားလေ့လာသူ တတိယနှစ်သမားများအတွက် ရေးဆွဲထား သော များပြားသော နားထောင်ရမည့်သင်ခန်းစာများကို ကြေငြာသည်။ ၄င်းတွင် မြန်မာစကား ပြောသူများက အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုပြောဆိုသောစကားပြောခန်း (၄) ခုပါဝင်သည်။ ၄င်းတို့သည် ပြင်သစ်ပြည် မာဆေးဆိပ်ကမ်းမှ နောက်ကျနေသော မော်တော်ဘုတ်အကြောင်း၊ စာတိုက်တွင် စာတစောင်ပို့ရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရပုံအကြောင်း၊ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများ အကြောင်း စသည်ဖြင့်ဆွေးနွေးပြောဆိုသည်။ စကားပြောခန်းတခုစီကိုပြန်ဖွင့်ပြသည်။ သို့သော် စကားပြောသူများ သည် ဝါကျတကြောင်းရွတ်ဆိုပြီးတိုင်း ကျောင်းသားကိုနောက်မှလိုက်၍ ရွတ်ဆိုစေရန် အချိန်အနည်း ငယ်ပေးသည်။ သင်ခန်းစာ ၁၅ မှ ၂၂ မြန်မာဘာသာဖြင့် စကားလုံးများနှင့် ဝါကျများကို အသံထွက်ရွတ်ဆိုသည်။ နောက်ဆုံး၌ ဦးချစ်ဖေသည် စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်နေသော မိဖုရားတပါးပုံပြင်၏ အဆုံးပိုင်းကို ပြောဆိုသည်။ (ပုံပြင်၏အစပိုင်းကို အသံသွင်းချက် BER-1964-BUR-027 B-SOUND တွင် တွေ့နိုင် သည် ။)
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1966, tape 044, side A
Date Created (W3CDTF): 1966
Description: Le locuteur birman (U E Maung) annonce en birman et français un exercice pour les étudiants de troisième année de birman, intitulé ''Deux amis au port de Marseille'', et invite les étudiants à écouter le dialogue. C’est une conversation (très lente) entre un homme, appelé Ko Aye Maung, et une femme appelée Ma Khin Yi (locutrice Daw Khin Mya Kyu) qui porte sur le retard du bateau. Cette dernière offre alors au premier d’attendre chez elle l’arrivée du bateau. Ko Aye Maung se montre gêné, mais elle insiste. Il accepte alors, puis Ma Khin Yi lui demande s'ilabeaucoup de bagages. Ko aye Maung lui pose ensuite des questions sur sa famille, son mari et ses enfants. Il lui demande enfin son chemin pour aller à la poste et elle lui donne des indications (jusqu'à 3.25 min.) Le locuteur invite ensuite, en français, à répéter les phrases. Les deux locuteurs reprennent leur dialogue et font des pauses après chaque phrase pour permettre aux étudiants de répéter (jusqu'à 16.40 min.). Le locuteur annonce ensuite la deuxième partie intitulée ''A la poste'' et invite à écouter le dialogue. L'homme veut envoyer un télégramme, mais n'a pas de monnaie. La postière énonce la monnaie qu'elle va lui rendre. L'homme veut ensuite acheter un timbre pour envoyer une lettre dans le pays. La postière lui annonce aussi les tarifs pour les lettres internationales (jusqu'à 19.12 min.). Le locuteur annonce ''en arrivant à la maison''. Ma Khin Yi accueille Ko Aye Maung et lui présente son mari. Mais en fait les deux hommes se connaissent, car ils sont allés ensemble à l'université. Le mari invite Ko Aye Maung à aller prendre une douche (jusqu'à 20.51 min.). Le locuteur invite ensuite, en français, à répéter les phrases. Les deux locuteurs reprennent les deux derniers dialogues et font des pauses après chaque phrase pour permettre aux étudiants de répéter (jusqu'à 32 min.). Leçon 15 : prononciation de syllabes avec les différents tons, puis de phrases (jusqu'à 34 min.) Leçon 16, 17: idem (jusqu'à 40 min.) Leçon 18 à 19: prononciation de phrases (jusqu'à 47 min.). Leçon 20 à 22: idem (jusqu'à 53.50 min.). Enfin, U Chit Pe raconte ce qui est en apparence la fin du conte de la reine folle (dont le début se trouve dans l'enregistrement BER-1964-BUR-027-B_SOUND), mais se trouve coupé à 1h03 min.
The Burmese narrator (U E Maung) announces (in both Burmese and French)atask for Third year learners of Burmese, which title is « Two friends at the port of Marseille», and invite students to listen to the dialogue. It isavery slow conversation betweenaman, whose name is Ko Aye Maung, andawoman called Ma Khin Yi (role played by Daw Khin Mya Kyu) aboutaboat delay. Then, Ma Khin Yi invites Ko Aye Maung to her house, to wait for the boat. Ko Aye Maung is embarrassed, but as she insists, he finally accepts the invitation. Next, she asks him if he hasalot of luggage. Ko aye Maungs asks her questions about her family, her husband and children. Finally, he asks her the way to the post-office, and she gives him indications (until 3.25 min.). Afterwards, the narrator invites students (in French) to repeat the sentences of the dialogue. The two speakers then read the same conversation, and makeashort pause after each sentence to give time for the students to repeat them (until 16.40 min.). The narrator then announces the second part of the task, which title is «At the post-office», and encourage the students to listen to the dialogue. Ko Aye Maung, the male speaker, wants to sendatelegram, but has no change. So the postal worker tells him the exact amount of money she is going to give him back. Next, Ko Aye Maung wants to sendaletter in the country. The postal worker gives him the prices to send national and international letters (until 19.12 min.). The narrator announces the title “arriving back home”. Ma Khin Yi welcomes Ko Aye Maung and introduces him to her husband. Asamatter of fact, the two men know each other, because they went to the university together. The husband invites Ko Aye Maung to takeashower (until 20.51 min.). Next, the narrator invites (in French) students to repeat the sentences. The two speakers repeat the last two conversations, and makeashort pause after each sentence to give time for the students to repeat them (until 32 min.). Lesson 15: pronunciation of syllables with different tones, and of sentences (until 34 min.). Lessons 16, 17: same as above (until 40 min.) Lessons 18 to 19: pronunciation of sentences (until 47 min.). Lessons 20 to 22: same as above (until 53.50 min.). Finally, U Chit Pe tells what apparently is the end of the tale of the queen who is mentally disturbed (the beginning of the tale can be found in recording BER-1964-BUR-027-B_SOUND), but the recording is cut at 1h03 min
မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်ပြောသူ (ဦးအေးမောင်)သည် တတိယနှစ် မြန်မာဘာသာစကားလေ့ လာသူများအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းခေါင်းစဥ် ‘မာဆေးဆိပ်ကမ်းမှ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး’ ကို ပြင်သစ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ကြေငြာပြီး ကျောင်းသားများအား စကားပြောခန်းကို နားထောင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ အလွန်နှေးသောစကားပြောခန်းတွင် ကိုအေးမောင်အမည်ရှိ အမျိုးသားတဦးနှင့် မခင်ရီအမည်ရှိ အမျိုးသမီးတဦး (ဒေါ်ခင်မြကြူက အသံဖြင့်သရုပ်ဆောင်သည်)တို့ မော်တော်ဘုတ်နောက် ကျနေခြင်းအကြောင်းပြောဆိုနေကြသည်။ ထို့နောက်မခင်ရီသည် ကိုအေးမောင်အား နောက်ကျနေ သော မော်တော်အားစောင့်ရန် သူမ၏အိမ်တွင်စောင့်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ကိုအေးမောင်သည် စိတ်အ နှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားပုံရသော်လည်း သူမက အတင်းအကြပ်ဖိတ်ခေါ်သဖြင့် နောက်ဆုံး၌ သူမ၏ ဖိတ် ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမသည် ကိုအေးမောင်တွင် ခရီးဆောင်အိတ်များစွာပါခြင်းရှိမရှိ မေး မြန်းသည်။ ကိုအေးမောင်က သူမ၏မိသားစု၊ သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့် ကလေးများအကြောင်းမေးမြန်းသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူသည် စာတိုက်သို့သွားသောလမ်းကိုမေးရာ သူမက လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။ (၃.၂၅ မိနစ် အထိ) ထို့နောက် စကားပြောသူသည် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် ကျောင်းသားများကို စကားပြောခန်းမှ ဝါကျ များကို လိုက်၍ရွတ်ဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ ထို့နောက် စကားပြောသူနှစ်ဦးသည် ထိုစကားပြောခန်းကိုပင် ပြန်လည်ဖတ်ကြား၍ ဝါကျတကြောင်းစီဖတ်ပြီးတိုင်း ခေတ္တအချိန်ပေး၍ ကျောင်းသားများကို နောက်မှ လိုက်၍ ရွတ်ဆိုစေသည်။ (၁၆.၄၀ မိနစ်အထိ) ထို့နောက်စကားပြောသည့် သင်ခန်းစာဒုတိယအပိုင်းကိုကြေငြာသည်။ ‘စာတိုက်တွင်’ ဟူသော ခေါင်းစဥ်ဖြင့် စကားပြောခန်းကို ကျောင်းသားများအား နားထောင်ရန်တိုက်တွန်းသည်။ အမျိုးသား စကားပြောသူ ဦးအေးမောင်သည် ကြေးနန်းတစောင်ကိုပို့လိုသည်။ သို့သော် ၄င်းထံတွင် ပိုက်ဆံအကြွေ မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် စာတိုက်ဝန်ထမ်းသည် သူမပြန်အမ်းမည့်ငွေအတိအကျကိုပြောသည်။ ထို့နောက် ကိုအေးမောင်သည် ပြည်တွင်းစာတစောင်ကိုပို့လိုသည်။ စာတိုက်ဝန်ထမ်းသည် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ စာပို့စျေးနှုန်းများကို ပြောပြသည်။ (၁၉.၁၂ မိနစ်အထိ) စကားပြောသူသည် ‘အိမ်ပြန်ရောက်ခြင်း’ ခေါင်းစဥ်ကိုကြေငြာသည်။ မခင်ရီသည် ကိုအေးမောင် ကိုဖိတ်ခေါ်ကြိုဆို၍ သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤသို့ဖြင့် အမျိုးသားနှစ်ဦးသည် တက္ကသိုလ် တွင် အတူပညာသင်ဖူးသည်ကို သိရှိလာပြီး ရင်းနှီးသွားကြသည်။ သူမ၏ခင်ပွန်းသည် ကိုအေးမောင်အား ရေချိုးရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ (၂၀.၅၁ မိနစ်ထိ) ထို့နောက် စကားပြောသူသည် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် ကျောင်းသားများအားဝါကျများကိုလိုက်၍ ရွတ်ဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ စကားပြောသူနှစ်ဦးသည် နောက်ဆုံးစကားပြောခန်း နှစ်ခုကိုထပ်မံပြောကြား ၍ ဝါကျတကြောင်းဆုံးတိုင်း အချိန်အနည်းငယ်ပေး၍ ကျောင်းသားများကို လိုက်ဆိုစေသည်။ (၃၂ မိနစ် အထိ) သင်ခန်းစာ ၁၅ စကားလုံးများနှင့် ဝါကျများကို အသံထွက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကြေငြာခြင်း (၃၄ မိနစ်အထိ) သင်ခန်းစာ ၁၆၊ ၁၇ အထက်ပါအတိုင်း (၄၀ မိနစ်အထိ) သင်ခန်းစာ ၁၈ မှ ၁၉ ဝါကျများကို အသံထွက်ရွတ်ဆိုခြင်း (၄၇ မိနစ်အထိ) သင်ခန်းစာ ၂၀ မှ ၂၂ ထိ အထက်ပါအတိုင်း (၅၃.၅၀ မိနစ်အထိ) နောက်ဆုံး၌ ဦးချစ်ဖေသည် စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်နေသူ မိဖုရားအကြောင်း အဆုံးသတ်ကို ပြောကြား သည်။ (ပုံပြင်၏အစပိုင်းသည် အသံသွင်းချက် BER-1964-BUR-027-B- Sound) တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် ယင်းအသံသွင်းချက်သည် ၁ နာရီ ၃ မိနစ်တွင် ပြတ်တောက်သည်။
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1966_BUR_044_A
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-b2d660d7-1f12-3287-b7b7-2f31684dc891
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1966-BUR-044-A.wav
Citation: Bernot, Denise (researcher); Candier, Aurore (consultant); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Institut national des langues et civilisations orientales (sponsor); Vittrant, Alice (depositor); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor); Khin Khin Zaw (consultant); Than Than Oo (consultant). 1966. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale.
Terms: area_Asia area_Europe country_FR country_MM dcmi_Sound iso639_fra iso639_mya olac_dialogue olac_primary_text
Up-to-date as of: Mon Sep 20 14:43:16 EDT 2021